TMLTStaff, Onye edemede na Akwụkwọ Akụkọ Ugbu a: Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a
gbara akwụkwọ Job by TMLTStaff na July 23, 2021	• 0 Comments
Standard Chartered Bank Nigeria Recruitment Portal 2021: N'isiokwu a, ị ga-amụta maka nkọwa ụlọ ọrụ, nka ngwa, chọrọ na iru eru. Ndị nwere mmasị na-enyocha akwụkwọ kwesịrị ịgbaso usoro ụzọ dị n'okpuru maka ngwa nke ọma. Banklọ Ọrụ Akara Akara - Anyị na-adọta ndị nwere nkà. Ọ bụghị naanị na ha nwere ike inye gị uru nke ahụmịhe ha, ha na-ekpughekwa [
gbara akwụkwọ Job by TMLTStaff na July 23, 2021	• 2 Comments
United Nations World Food Recrutment 2021: Peeji a ga - eduzi gị na ozi kachasị ọhụrụ gbasara otu esi etinye akwụkwọ maka United Nations World Programme na - enye ọrụ maka ndị gụsịrị akwụkwọ na ndị na - agụghị akwụkwọ. N'isiokwu a, ị ga-amụta maka nkọwa ụlọ ọrụ, nka ngwa, chọrọ na iru eru. Nwere mmasị na-achọ ịbata kwesịrị ịgbaso ụzọ ndepụta […]
gbara akwụkwọ Job by TMLTStaff na July 23, 2021
United Nations World Food Programme Job Portal 2021: Peeji a ga - eduzi gị na ozi kachasị ọhụrụ gbasara otu esi etinye akwụkwọ maka United Nations World Programme na - enye ọrụ maka ndị gụsịrị akwụkwọ na ndị na - agụghị akwụkwọ. United Nations Food Programme bụ ụlọ ọrụ kasịnụ n'ụwa na-ahụ maka ọdịmma mmadụ na-alụso agụụ ọgụ n'ụwa niile. Ozi nke WFP bụ […]
gbara akwụkwọ Nkuzi mmuta by TMLTStaff na July 23, 2021	• 0 Comments
Gọọmentị Colombia na-anakwere ngwa MSc na PhD si n'aka ụmụ amaala mba ọzọ 2021/2022. Lee nkowa ndi ozo banyere ndi isi ochichi nke Colombia & Ulo akwukwo nke PhD 2021. Gọọmentị nke Colombia na-enye ndị amaala mba ọzọ Ọzụzụ ka ha nwee mmemme Specializations, Nna-ukwu na PhD na Colombia. Ha bụ ego enyere ndị mba ọzọ, na nkwụghachi ụgwọ maka […]
gbara akwụkwọ scholarships by TMLTStaff na July 23, 2021	• 0 Comments
You nwere mmasị ịchụso mmemme nke Postgraduate na Canada? Ọ bụrụ ee, lee ohere ị nwere. Mahadum Canada site na Vanier Canada Graduate Scholarships na-akpọ akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ chọrọ ịmalite mmemme mmụta ha na ụlọ akwụkwọ. A na - ewere mmemme mmụta a na Mahadum Canada na oke Vanier CGS. Na-enweghị isịneke, […]
gbara akwụkwọ Nkuzi mmuta by TMLTStaff na July 23, 2021
Studentsmụ akwụkwọ Goodnews na-achọ enyemaka ego. Mahadum British nke Exeter nwere obi uto inye umu akwukwo ruru eru International Scholarship Excellence Scholarship. Ọmụmụ malitere na Septemba 2021. Lee nkọwa gbasara otu esi etinye akwụkwọ n'okpuru. Usoro ihe omume dị maka pụtara ìhè mba-akwụ ụgwọ ụmụ akwụkwọ na-aga debanye aha maka afọ mbụ ntinye malitere malitere ọmụmụ na September 2021. Dị ka otu […]
gbara akwụkwọ Job by TMLTStaff na July 22, 2021	• 1 Comment
ExxonMobil Nigeria Recruitment 2021: Peeji a ga - eduzi gị na ozi kachasị ọhụrụ gbasara otu esi etinye akwụkwọ maka ExxonMobil Nigeria Job na - enye ndị gụsịrị akwụkwọ na ndị na - agụghị akwụkwọ. N'isiokwu a, ị ga-amụta maka nkọwapụta ọrụ ExxonMobil Nigeria, nka ngwa, ihe achọrọ, na iru eru. Ndị nwere mmasị na-enyocha akwụkwọ kwesịrị ịgbaso usoro ụzọ dị n'okpuru maka ngwa nke ọma. […]
gbara akwụkwọ Job by TMLTStaff na July 22, 2021	• 3 Comments
ExxonMobil Graduate Mbanye 2021: you na-achọ ọrụ ExxonMobil na Nigeria 2021? Ọ ga-amasị gị ịrụ ọrụ na ExxonMobil? Ọzọkwa, ị gaghị eche ma ọ bụrụ na anyị eduzi gị otu ị ga - esi tinye akwụkwọ maka ntinye n'ọrụ ExxonMobil na Nigeria na gafere? Ọ bụrụ ee, gaa n'ihu gụọ. Mobil na-amịpụta Nigeria Unlimited (MPN) na Esso Exploration […]
Ngwa Virtual Girlfriend kachasị mma 2021 maka Ngwaọrụ gam akporo na iOS
gbara akwụkwọ Isiokwu by TMLTStaff na July 22, 2021
Virtual Girlfriend App - Enwetara m ya, mgbe ụfọdụ anyị na-agwụ ike ma ọ nweghị onye ga-ekwurịta okwu, ma tụkwasị m obi, ọ bụ mmetụta na-egbu mgbu. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na owu na-achọ onye ibe, ọ nweghị nsogbu, a ga m egosi gị ngwa dịnụ iji nwee enyi nwanyị wee nọrọ na […]
Hụ ego ole akwụ ụgwọ iji mụọ na Spain dị ka onye mba ọzọ na 2021
gbara akwụkwọ Nbanye Mkpa, Isiokwu, mmụta by TMLTStaff na July 22, 2021
Dị ka nwa akwụkwọ na-achọsi ike na Spain, ị ga-amata ego iji mụọ na Spain tupu ị kwakọba akpa gị maka ala nke oke ehi na matadors. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta na spain, nke niile bụ eziokwu iji chọta mmasị n'ime obi gị. Chọpụta ihe n'okpuru. Nkuzi ụgwọ […]